Soo dejisan Datacol 7.14 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Datacol
Datacol – aalad awood in qalabayn search, geeddi-socodka iyo socdo xaddi badan oo macluumaad ee internet-ka. software The aad bay u nayaa shaqada user ee automating hawlaha badan ee caadiga ah, la socod iyo taxliilin goobaha lagama maarmaanka ah, baadhidooda iyo ururinta oo ka mid ah xiriirada ah iibsada kara, iwm Datacol awood si loo badbaadiyo xogta ee Excel, CSV, WordPress, Blogspot, waqtiyada ama Ucoz. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo ballaariyo awoodda by rakibidda tiro badan oo lagu daro.
Is goobidda iyo macluumaad processing
Saves xogta helay qaabab kala duwan
Tiro badan oo lagu daro
Soo dejisan Datacol
Isticmaalkani wuxuu u baahan yahay .NET Framework si habboon u shaqeeya
Faallo ku saabsan Datacol
Datacol Xirfadaha la xiriira
software multifunction ee shaqada ugu wax soo saar leh e-mail. software waxa uu leeyahay nidaamka ammaanka iyo spam ah filtarrada awood badan.
HJSplit – softiweer u kala qaybiya faylasha qaybaha oo aad ugu biirto ka dib. Software-ka wuxuu taageeraa faylasha cabirro iyo qaabab kala duwan.
Xirmooyinka Qalabka AV – waa adeegyo kala duwan oo laga soo saaray soosaarayaasha rasmiga ah ee alaabada amniga in ay gabi ahaanba ka tirtiraan barnaamijyadooda fayraska ah iyo kuwa sunta ah.